Soo dejisan VideoMach 5.15.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: VideoMach
VideoMach – waa tifaftiraha fiidiyowga oo leh qalab sare oo wax looga beddelo oo loo beddelo. Waxaa ka mid ah muuqaalada software-ka ah kuwan soo socda: sameynta fiidiyowga fiidiyowga ka soo baxa muuqaalka sawirada, isku-duwo faylalka maqalka iyo fiidiyowga, kala-soocida fiidiyowga maqalka iyo sawirrada, soo-saar raadadka cod-bixinta ama qaybo ka mid ah fiidiyowga, u beddel fiidiyowyada gaaban muuqaalka sawirrada, iwm. VideoMach waxay taageertaa tiro badan oo qaababka garaafka ah waxayna la shaqeeyaan qaababka caanka ah ee codka iyo fiidiyowga. Software wuxuu leeyahay tiro ka mid ah tifaftireyaasha asaasiga ah sida dib u habeyn, isbedel, kor u qaad, hoos u degso, dalagga iyo dalbado saameyno muuqaal oo kala duwan ee muuqaalka ama sawirrada. VideoMach waxay la timaadaa qaab-rogeeye faylasha oo kuu ogolaanaya inaad u rogto faylasha warbaahinta mid ka mid ah qaab kale. Software sidoo kale waxay ku siinaysaa inaad isticmaasho qalab aan caadi ahayn, mid ka mid ah kuwaas oo ku dhejin karo faylasha faylasha iyo fuliyaa dhammaan filtarrada la isticmaalay, ka dibna wuxuu tiriyaa tirada guud ee midabada gaarka ah ee fiidiyaha.
Abuurista fiidiyowga sawirada muuqaalka
Ku biirinta maqalka iyo fiidiyaha
Dejinta codsiyada audio iyo video
Isbedelka fiidiyaha GIF
Dejinta fursadaha beddelaadda
Codso shaandhooyin kala duwan
Soo dejisan VideoMach
Faallo ku saabsan VideoMach
VideoMach Xirfadaha la xiriira